"Laba Koob Adduun Ayay Uruguay Ku Guuleysan Lahayd Haddii Lionel Messi U Dhalan Lahaa..." - Laacib
HomeKulamada Caalamiga Ah“Laba Koob Adduun Ayay Uruguay Ku Guuleysan Lahayd Haddii Lionel Messi U Dhalan Lahaa…”
“Laba Koob Adduun Ayay Uruguay Ku Guuleysan Lahayd Haddii Lionel Messi U Dhalan Lahaa…”
April 27, 2021 Abdiwahab Ahmed Kulamada Caalamiga Ah, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Halyeygii xulka qaranka Uruguay ee Diego Lugano ayaa sheegay in ay illaa laba koob adduun ku guuleysan lahaayeen sannadihii lasoo dhaafay haddii uu waddankooda u dhalan lahaa kabtanka Argentina ee Lionel Messi.
Diego Lugano oo qarankiisa u saftay 95 koob ayaa kooxo badan usoo ciyaaray, waxaana ka mid ahaa naadiyada uu waqtiga badan kusoo qaatay Malaga iyo West Brom, laakiin haddana waxa uu ahaa laacib adag oo waddankiisu ku xisaabtamo.
Laacibkan hore ayaa ku dooday, in ay hubaal tahay oo uu waddankiisu hanan lahaa koobkii adduunka 2010 oo ay kaalinta afraad ku dhamaysteen iyagoo semi-finalkii uu ku reebay xulka qaranka Netherlands oo kaga badiyey 3-2, xulka Jarmalkuna ku dhamaystay kaalinta saddexaad iyagoo isla natiijadaas uu xulka qaranka Spain kaga badiyey.
Koobka Adduunka kale ee uu Diego Lugano sheegay in ay ku guuleysan lahaayeen ayaa ahaa 2014 oo ay ku hadheen wareeggii 16ka iyadoo Luis Suarez oo qaniinay Giorgio Chiellini uu ganaax ku maqnaaday, waxaana tartanka ka reebay xulka qaranka Colombia oo ku garaacay 2-0.
Lugano ayaa yidhi: “Haddii Messi uu ahaan lahaa Uruguayan, Koobkii Adduunka ee 2010 anaga ayaa ku guuleysan lahayn.
“hADDII Messi uu ahaan lahaa Uruguay, koobkii adduunka 2014 ee Brazil, sidoo kalena aanu naga bixi lahayn Luis Suarez, annaga ayaa sidoo kale ku guuleysan lahayn.”
Lugano ayaa waxa uu ka mid ahaa xiddigihii xulka qaranka Uruguay ee koobkii Adduunka 2014 iyadoo uu waliba ahaa kabtan.